Viralheat: SMBs को लागी सोशल मीडिया निगरानी Martech Zone
भाइरलहाट: एसएमबीको लागि सोशल मीडिया निगरानी
आइतवार, जनवरी २,, २०१। बुधबार, फेब्रुअरी 10, 2016 Douglas Karr
हामी केहि समय को लागी एक सामाजिक मिडिया निगरानी सेवा को खोजीमा छौं। एक सामाजिक मिडिया मोनिटरिंग प्रणालीले तपाइँलाई ब्रान्ड र कीवर्डहरू सेट अप गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र विभिन्न सामाजिक मिडिया साइटहरूको मोनिटर गर्न, उल्लेख र गतिविधिलाई ती वरिपरि उल्लेख गर्न। कम्पनीहरु को लागी, एक सामाजिक मिडिया निगरानी रणनीति ग्राहक सेवा मुद्दाहरु को प्रबन्धन को लागी धेरै आकर्षक हुन सक्छ, मान्छे लाई तपाइँको ब्रान्ड को बारे मा कस्तो महसुस गर्छ, र तपाइँको सामाजिक रणनीतिहरु कत्तिको राम्रो प्रदर्शन गर्दै छन् अवलोकन गर्न।
मुद्दामा यी प्रणालीहरूको अविश्वसनीय लागत हो! सामाजिक मिडिया रणनीतिमा फिर्ताको उत्पादनमा समय लाग्छ, त्यसैले एक ग्राहकलाई एक प्लेटफर्म थप्नमा कुरा गर्नु जुन हजारौं डलर मासिक छ थोरै चरम छ। मैले केहि सामाजिक मिडिया बजारलाई प्रश्न सोधें, "के त्यहाँ एक सस्तो सामाजिक मीडिया निगरानी प्लेटफर्म छ?" र धेरै धेरै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएन।
यद्यपि बाट एक प्रतिक्रिया क्यारी बग्बी मलाई धेरै उत्साहित छ। भाइरलहीट एक मजबूत सामाजिक मिडिया अनुगमन र विश्लेषण प्लेटफर्म साना र मध्यम आकारको व्यापार बजार (SMB) को लागि निर्मित।
म प्रयोग गर्न उत्साहित छु भाइरलहीट हाम्रो ग्राहकहरूको सामाजिक मिडिया उपस्थिति निगरानी गर्न शुरू गर्न। प्रणाली धेरै शक्तिशाली सूचीबद्ध सूचीबद्ध संग एकदम बलियो देखिन्छ:
वास्तविक समय अनुगमन - यो एक मुख्य सुविधा हो। धेरै अन्य प्रणालीहरू वास्तविक-समय होइनन्, केवल अन्य प्रणालीहरूबाट डाटा एकत्र गर्दै।
प्रभाव विश्लेषक अभियानलाई प्रभाव पार्न सक्ने ठूलो प्रभावको साथ अनुयायीहरूलाई पहिचान गर्न।
सेन्मेन्ट विश्लेषण प्रत्येक र हरेक उल्लेख को मुड पहिचान गर्न।
भाइरल विश्लेषण ट्वीटहरू र उल्लेखहरू पहिचान गर्न जुन भाइरल सम्भावित छ।
भिडियो अनुगमन २०० भन्दा बढी भिडियो साइटहरूको।
CRM एकीकरण सेल्सफोर्समा सुराउँदछ वा एक्सेल मार्फत डाउनलोड गर्न।
जियो स्थान विश्वमा कुनै पनि स्थान द्वारा तपाइँको प्रोफाइल प्रतिबन्ध गर्न क्षमता।
गतिशील सतर्कता क्षमता ताकि तपाईं उल्लेख मा द्रुत सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
एपीआई - ताकि तपाइँले चाहानु भएको कुनै पनि बाह्य प्रणालीको साथ डेटा एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
सुविधाहरू बाहेक, सबैभन्दा प्रभावशाली पक्ष भाइरलहीट मूल्य निर्धारण हुन सक्छ। तिनीहरूको खोल्ने प्याकेज आधारभूत सुविधाहरूको साथ एक महिना। 9.99 छ। एक package २। .29.99 per प्रति महिनाको प्याकेजमा सबै चीज छ जस्तो देखिन्छ सानो व्यवसाय शुरू गर्न आवश्यक छ। Month। .. प्रति महीना प्याकेजले ब्रान्डेड एजेन्सी प्याकेज समावेश गर्दछ!
मूल्यको लागि, यो मैले पाएको सबैभन्दा सब भन्दा बलियो सामाजिक मिडिया अनुगमन प्याकेज हो। यदि तपाइँ त्यहाँ बाहिर SMBs को लागी बढी सामाजिक मिडिया निगरानी प्लेटफार्महरु को बारे मा थाहा छ (सामाजिक मिडिया प्रकाशन छैन), टिप्पणीहरु मा हामीलाई थाहा दिनुहोस्। र - यदि तपाईं एक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भाइरलहीट, हामी प्रणालीमा तपाईंको विचार सुन्न चाहन्छौं। हामी धेरै उत्साहित छौं कि हामीले एक सम्बद्ध प्याकेजको लागि साइन अप गर्‍यौं (र ती पोष्टहरू यस पोष्टमा हुन्)।
टैग: भू स्थान अनुगमनभौगोलिक अनुगमनप्रभावशाली विश्लेषकहरूभावनात्मक विश्लेषणसामाजिक सीआरएम एकीकरणसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया सचेतहरूसामाजिक मिडिया एनालिटिक्ससामाजिक मिडिया अनुगमनभिडियो निगरानीभाइरल विश्लेषणभाइरलहीट
कसरी साना व्यवसायहरूले सम्पर्कहरू प्रबन्ध गर्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ
डिसे 10, 2012 मा 12: 55 AM
डग, मैले तपाईंको पोष्ट देख्दा मैले क्र्याक गरें किनभने मैले यो SMBs को लागि सोशल मिडिया निगरानी उपकरणहरू अनुसन्धान गरेर फेला पारे। त्यसपछि मैले तपाईंको पोस्टमा मेरो नाम देखे। चिच्याउनुभएकोमा धन्यवाद!
म सँधै नयाँ अनुगमन उपकरणहरूको खोजीमा छु जुन स्टार्टअपहरू र SMB हरूका लागि किफायती छन्, तर यस्तो देखिन्छ कि Viralheat अझै पनि पैसाको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यदि मैले यस्तै केहि भेटें भने, म तपाईंलाई थाहा दिन पप इन गर्नेछु।
डिसे 10, 2012 मा 12: 58 AM
कृपया गर्नुहोस्, @CarriBugbee: disqus! हामीले त्यहाँ अझ राम्रो सम्झौता फेला पार्न बाँकी छ (तपाईंलाई धन्यवाद!) - र Viralheat ले आफ्नो प्लेटफर्म सुधार गर्न जारी राख्छ।